Sunday,31 May, 2020 | १८ जेठ २०७७
बिपिन सापकाेटा काठमाडौं, २७ चैत
‘बाबु ! तिमीलाई कस्तो छ ?’
आँखारी आँसु पारेर बाआमाले फोनमा हालखबर सोध्दा म अवाक् हुन्छु ।
‘हजुरलाई कस्तो छ ?’
फेरि श्रीमतीको फोन आउँछ । उस्तै प्रश्न ।
अनि छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीले बारबार सम्झँदा लाग्छ म पनि सँगै भएको भए हुने नि !
कहाँ सबैको भाग्य एउटै हुन्छ र ?
यदि भाग्य लेख्ने अधिकार भावीलाई नभएर मेरी आमालाई हुन्थ्यो भने शायद मजति भाग्यमानी अरू को हुन्थ्यो होला र !
यति बेला म युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) काे अबुधावीमा पर्ने मुसफा शहरमा छु । सात समुद्र पारि । मुसफा शहरमा जब चिसो सिरेटो चल्छ, तब मेरो मन नेपालकै पाखापखेरामा घुम्न थाल्छ ।
बिरानो शहरमा रुमल्लिएको पनि ७ वर्ष पुगेछ । बितेका वर्षहरू गन्दा मुटु निचोरिन्छ । जब दुःख र संकट पर्छ, तब देश र आफ्नो घरपरिवार नै आँखावरिपरि घुमिरहन्छ । अनि मन एकाेहाेरिन्छ ।
यो कथाव्यथा मेरो मात्र होइन, लाखौँ युवाहरूको हो । मजस्ता लाखौँ युवाहरू अहिले मजस्तै गरी अर्काको देशमा यसरी नै छटपटाइरहेका छन्, आफ्नो घरपरिवार र देशलाई सम्झेर ।
सामाजिक सञ्जालमा अनेक समाचारहरू आउँछन् । अझ नेपालसँग सम्बन्धित समाचार आउनेबित्तिकै औँलाले क्लिक गर्न भ्याइहाल्छ ।
मैनौँ, दिन हुन लाग्यो । बाहिर निस्कन पाएको छैन । बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म सवारी साधन चलाउन र आवतजावत गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक कामबाहेक । बाहिर निस्क्यो कि यहाँको सरकारले कारबाही गरिहाल्छ ।
कारण– कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ।
अहिले विश्वलाई नै कोरोनाले आतंकित बनाएको छ । शक्तिराष्ट्र युरोप, अमेरिकासमेत कोरोनासँग हार खाएका छन् । यसबाट यूएई पनि अछुतो छैन । त्यसैले यहाँको सरकारले पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ ।
यूएईमा २ हजारभन्दा बढी काेराेनाका संक्रमित भएका छन् भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ । ११ जना नै नेपाली कोरोना संक्रमित छन् । जसमा २ जना ठीक भएर डिस्चार्ज भएका छन् । यूएई सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालीको उपचार निःशुल्क गरिरहेको छ ।
ओहो ! शक्ति राष्ट्रहरूको त यो हाल छ, यदि नेपालमा यस्तै भयो भने के होला ? मेरो मन भने नेपालकै चिन्तामा हुन्छ ।
कोरोनाको डर र त्रास एकातिर । अर्कोतर्फ नेपालमा कोरोना धेरै फैलिने त होइन भन्ने चिन्ता । नेपाल सरकारले लकडाउन गरेर जुन सर्तकता अपनाएको छ । यसले संक्रमण राेक्न केही राहत दिएको छ ।
आज कतिपय देशले सुरुमै लकडाउन नगर्दा जुन रूपमा मानवीय क्षति भइरहेको छ, त्यो अहिलेसम्म नेपालमा देख्न पाइएको छैन । यो खुसीको कुरा हो ।
यूएईमा यति बेला होटल, महल, रेष्टुरेन्ट, पार्क, मन्दिर, मस्जिद पूरै बन्द गरिएको छ । बिहान बेलुका सपिङका लागि सुपरमार्केट खोलिएको हुन्छ । अरु सबैे ठप्प छ । काम बन्द छ । कम्पनीहरू पनि बन्द हुन थालेका छन् । महिना दिन पुग्न लाग्यो । अब के गर्ने ? यहाँ रहेका नेपाली सोच्नमग्न बन्न थालेका छन् ।
नेपाल फर्किऔँ देश नै लकडाउनकाे अवस्थामा छ । एक देशबाट अर्को देश जान पाइँदैन । यूएईमै बसौँ, अब के गर्ने, के खाने भन्ने चिन्ता छ । तर, अहिलेको समय जहाँ छौँ, त्यहीँ बस्नुको विकल्प छैन । आफू पनि सुरक्षित र अरु पनि सुरक्षित हुने भनेको होम क्वारेन्टाइन नै हो ।
यूएईमा अलपत्र परेका र दुःखमा परेका नेपाली युवाका लागि काम पनि गरिरहेका छाैँ । खान बस्न र कामको समस्या परेमा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने गरेका छौँ । तर, कहाँ आफ्नो देशको जस्तो सहज हुन्छ र ?
अनि यो संकटमा आफ्नै घरमा हुन पाएको भए दुखमा पनि आनन्दको सास फेर्न पाइन्थ्यो । तर, यहाँ अर्काकाे देशमा बस्दाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । आफ्नो मनलाई बुझाउनुको विकल्प पनि छैन ।
२० दिन भयो रुममा बसेको । काम छैन । सामाजिक सञ्जाल र न्यूज हेर्नुबाहेक अरु केही विकल्प छैन । २० दिन पनि ७ वर्ष बिताएभन्दा पनि बढी लाग्न थालेको छ ।
फेरि यूएईमा मात्र होइन, नेपालमा मात्र पनि होइन, विश्वभर कोरोना फैलिएको छ । तर, याे काेराेना महामारी अरु देशमा जस्ताे गरी यूएईमा फैलिन नपाएकाले आफूलाई अहिलेसम्म सुरक्षित नै महसुस गरेकाे छु ।
यो संकटमा नेपाल सरकारले लकडाउन गरेर रोकथामको प्रयास गरेको छ । त्यसैले सबैले मिलेरे सामान गरौँ ।
जाे जहाँ छाैँ, साेही अवस्थामा रहाैँ, अलिकति समय धैर्यधारण गर्न सक्याैँ भने देश, देशवासी, आफू र परिवारलाई नै याे महामारीबाट उतार्न सक्छाैँ । यदि हामी बाच्यौँ भने हाम्रो भेट हुने नै छ । त्यसपछि फेरि खुसीको सास फेरौँला ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २७, २०७६, ११:४५:००
#काेराेना त्रास #यूएई डायरी
नयाँ हिटलर जन्माउन लागेको त होइन ?